प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको झुटा भाषण सुन्दा ताजुब लाग्छ :: महेश दत्त भट्ट :: Setopati
आराम छु, आराम चाहन्छु र हजुरको कार्यकुशलताको कामना पनि गर्दछु। आज म हजुरका लागि सानो पत्र कोर्न विवश भएको छु। पत्र पढि पत्राचार गरी दिन हुन सादर अनुरोध गर्दछु।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मलाई उम्मेदवारको हैसियतले मतदाताका रुपमा पत्र पठाउनु भएको थियो। आज म नागरिकका हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्र पठाउदैछु।
मेरो देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले घरघरमा खाना ल्याइ पुर्याउछन्। अब विदेशी भूमिमा सस्तो मूल्यमा परिश्रम बेचेर स्वाभिमानी बेच्नु पर्दैन। दुईतिहाइको सरकार बनेपछि महिनैपिच्छे सरकार गिराउने र बनाउने खेलको अन्त हुन्छ भनेर म ढुक्क थिएँ।
तर, सोचेजस्तो नहुँदो रहेछ। आँसी हतौडा बाहक सिम्रिक झण्डा र सूर्य मतदान चिन्हको प्रचारमा हातमा डिजे समातेर ‘सही पनि एमाले, मै पनि एमाले' भनेर मेरो गाउँको ५९ वर्षीय हर्क बहादुर निकै फूर्तिका साथ जुटेको थियो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, उता सहरतिर तपाईंको पनि उखान टुक्का मिश्रित भाषणले रौनक छाएको थियो। प्रचार र भाषणबाजीमा कुनै अपुगता रहेको थिएन। भोजभतेरमा कमि थिएन। जनता जुर्मुराएका थिए। यसैको फलस्वरुप दुईतिहाइ सहितको सरकार बन्यो। धेरैले गर्व गरे होलान्।
तर, ती गर्व गरेका दिन बितेको धेरै भएको छैन। अहिले एकाएक पुरानो रोगको पुनरावृत्ति भएको छ। सरकार बन्ने र ढल्नेको कुनै ठेगान हुँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूको मिठो भाषणबाट प्रभावित नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै दुईतिहाइ दिलायो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बने यता समय–समयमा विभिन्न काण्डहरुमा- भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद मात्र नभइ किस्ताबन्दीमा संविधानको हत्या समेत गर्यो।
हुँदा हुँदै अन्तिममा संसद नै विघटन गरेर नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनायो। संविधानको अपमान गर्दै सत्तास्वार्थको खेलमा नेपाली जनताको मतको हुर्मत उडाएर आफूलाई सर्वशक्तिमान बनाउने महत्वकांक्षाले तपाईंले नयाँ नाटक मञ्चन गरेर सात दशक लामो संघर्षपछि बनेको संविधानलाई विघटन गरेर 'कू' गर्नु भयो। योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ?
प्रधानमन्त्री ज्यु, तपाईं गुटको रक्षक र फरक मत राख्नेका लागि यति निर्मम हुनुहुँदो रहेछ, तपाईं कसरी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु भो? तपाईंकै शब्द सापटी लिएँ। तपाईंको यो हर्कतले मलाई पनि ताजुब लागेर आयो।
तपाईंले पार्टीभित्रको आन्तरिक संगठनात्मक प्राविधिक व्यवस्थापनगर्न नसकेर ५ वर्षे स्थायी सरकारको सबै सपना भुलेर नयाँ नाटक मञ्चन गर्दा कत्ति पनि लाज लागेन र? तपाईं त तपाईं तर संविधानको रक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आफ्नै रबरस्टाम्प बनाएर श्री ६ बन्न प्रेरित गर्नु भो। योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्ला र?
प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईंको कर्ममा मलाई कुनै भरौसा नै थिएन, किनकी गणतन्त्र ल्याउदा उखान वाचन गरेर बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्नु हुन्थ्यो। बयलगाडा र गणतन्त्रलाई विश्लेषण गर्ने तपाईंको यो अचेत मानसिकता बारे हामीलाई चिन्ता थियो। एक सचेत नागरिकका लागि यही काफी थियो तर, तपाईंको झुटो भाषण र झुटा सपनालाई नेपाली जनताले चिन्न सकेनन्। त्यही भुल थियो।
तपाईंका भाषण एकातिर र कर्म अर्कोतिर हुँदो रहेछ। तपाईं यति गफाडी र झुटो बोल्नु होला भन्ने विश्वास थिएन। तर, तपाईंको बोलीको ठेगान नहुँदो रहेछ। अब त मेरो देशको प्रधानमन्त्री भन्दा मेरो आफ्नै गरिमा घटेर आउदै छ। मलाई लाज लागिरहेको छ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंले गरेको भाषण, तपाईंका घोषणापत्रहरु सबै सुरक्षित छन्। तपाईंले समृद्धिको झुटो नारा लगाउनु भो। ठूल्ठूला कुरा लगाउनु भो, समुद्रमा पानी जहाजदेखि ग्याँस पाइपका समेत सपना बाड्नु भो तर अहिले तपाईंका कर्म हेर्दा जताततै भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद र कमिशनको जग बसाल्नु भयो।
किस्ताबन्दीमा संविधानको मर्म र भावानामाथि नै धावा बोल्नुभो। काण्डैकाण्डै गर्दै नयाँ इतिहास रच्नु भो र जगत हसाउनु भयो। गर्दागर्दा नेपाली मतदाताको अपमान गर्नुभो। यो व्यवस्था माथि नै अविश्वास पैदा गराउनु भयो।
आजका दिनमा पुनः तपाईंका भाषण सम्झिदै छु। तपाईंको समृद्धिको नारा, तपाईंको राष्ट्रियता कहाँ हरायो? खोज्दै छु। कतै भेटाएन। आज सोध्दैछु वैशाख-जेठको टन्टलापुर घाममा गिट्टी कुट्दै गरेकी सुत्केरी आमालाई सोधेँ, दीघरोगी भएको आर्थिक अभावमा हात फैलाइरहेको वृद्धलाई सोधेँ, कोरोना कहरका बीच स्वदेश फर्केर पुनः विदेशका लागि लाम लागेको युवालाई सोधेँ तर कतै पनि समृद्धिले छोएको भेटिएन।
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सबै घट्नाक्रम हेर्यौं, कतै शिर ठाडो भएन। हुँदाहुँदै पार्टीको गुटबन्दी मिलाउन, संसद विघटन र पुनर्स्थापना गराउनका लागि समेत प्रत्यक्ष रुपमा रअ प्रमुख सामन्त गोयल र चाइनाकी राजदुत हाउ यान्छी समेतको दौडधुपले मलाई लाग्छ तपाईंको राष्ट्रियता हाट बजारमा कौडीको मूल्यमा बेचियो।
न त समृद्धि, न त राष्ट्रियता, न त स्थिर सरकार नै। तपाईंबाट के आश गर्नु? तपाईंका हरेक वाणीहरु झुटमा प्रमाणित भए।
अझ हरेक दिन खाडी मुलुकतर्फ गएर रोजीरोटी गर्नेहरुको भीड उस्तै छ। पैसा कमाएर घरधन्दा चलाउने योजनाकार नेपाली युवाहरुको सपना बाकसमा लास बनेर फर्किएको सत्य घट्नाहरु प्रधानमन्त्रीज्यूका सामु छदैछन्। सेवा सहजता र विकास कुरेर बसेको मेरो गाउँको अवस्था उस्तै छ।
काम खोज्ने कामले लखतरान परेका युवाहरूको दैनिकी पनि उस्तै छ। फेरियो त शासकहरूको मुहार, शासन भने उस्तै छ। अरूबेलाभन्दा यो बेलाको सरकारमा केही भिन्नता भने देखिएको छ। केही गर्न नसकेपनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो भाषणमार्फत मतदाताहरूलाई चुड्किला सहितको सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ। यसमा हाम्रो गाउँका गरिब जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्।
गल्ती भए माफ दिनुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू, गरिब जनता भोको पेटलाई फेटोले कसेर सधैँ चुड्किला सुनिरहन सक्दैनन्। दुर्गम बस्तीमा बस्ने दाजुभाइको टिनले छाएको सानो झुप्रो थियो। त्यो पनि यसपालिको हावाहुरीको बेगले उडाएर लग्यो। उसका लागि खुल्ला आकाशको बास भएको छ।
साना नानीबाबुहरुलाई चिसोले निमोनिया भैसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पानीजहाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अझै पनि गाउँमा घण्टौँ लगाएर पानी लिन पँधेरो जानु हुन्छ। अब भन्नुस्, म पानीजहाजको सपना देखेर पानी खान छोडिदिउँ?
आजकाल विद्यालय पढ्ने बहिनीहरु बाहिर निस्कन डराउँछन्। उनीहरू झिसमिसेमा पधेरोसम्म पनि जान मान्दैनन्। स्कुल कलेज पुर्याउन जानुपर्छ। आजकाल उनीहरू बाघ भालुहरूसँगभन्दा मान्छेहरूसँग ज्यादा डराउँछन्। उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो डर त यो देशको सरकारसँग लाग्छ। हाम्री गाउँकी चेलीबहिनीहरुको अविश्वास अपराधीसँगको मात्र होइन, सरकारसँगको पनि अविश्वास हो।
प्रधानमन्त्रीज्यू, नेताले सपना देख्न पाइन्छ र बाड्न पनि पाइन्छ। तर, सस्तो लोकप्रियताका निमित्त तपाईंले बाडेका सपनाहरुले गाउँका हजुरबुवा, हजुरआमाहरु सरापीरहेका छन्। हजुरले दोब्बर बनाउने भनेको वृद्ध भत्ता जतिको त्यति छ। उनले सधैं छाती पिटेर रोइरहेका छन्।
आजकाल हजुरको लागि जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगाउँदै हिँडेको मेरो गाउँको हर्क छाती पिट्दै रोइरहेको छ। हजुरको कार्यकर्ताले खोली खोलामा पूल निर्माण गरी दिने कुराले हजुरको पार्टीलाई ढुक्क भएर मतदान गरेका थिएँ। तर, त्यो खोलीखोला कार्यकर्ताका लागि खाने भाँडो बनेको छ। तल्लो गाउँदेखि साना नानीहरुले करिब एक घण्टाको बाटो हिडेर स्कुल जाने दिन पनि जस्ताकै त्यस्तै छन्।
म आजकल कतिखेर सोच्न बाध्य हुन्छु। किन? यो मामिलामा तपाईं चुक्नु भयो। सरकारको संवेदनशीलता किन हराएको हो? निर्मलाको हत्याकाण्ड किन कता हरायो? सुन काण्ड के भएको हो? वाइडबडी रविन्द्र जिसँगै गएको हो कि?
अनि एउटा कलाकारले नेता र सरकारको असली चरित्रको पर्दाफाँस गर्दा अरिंगालहरुको धम्की आएछ। किन लोकतन्त्रमा कला माथि अंकुश लागेकै हो र? होइन भने किन सरकार न्याय दिन डग्मगायो?
प्रधामन्त्री ज्यु, तपाईंको उखान टुक्का मिश्रित भाषणमा निकै मिठास थियो। बोल्ने बेला त निश्चय पनि यी कामहरु हुन्छन् जस्तो लाग्थ्यो होला। तर, आज हजुरको पार्टीलाई मतदान गरेका जनता अहिले सुन्न नमिल्ने गरी एकहोरो गाली गरीरहेका छन्। मलाई पनि चिन्ता लाग्छ मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको गरीमामय पदमाथि जे पायो त्यही गाली सुनेर।
कहाँ हरायो प्रधानमन्त्री ज्यु तपाईंको राष्ट्रियता। किन यो देशमा फेरि अशान्ति नै मच्चाउने खेल हो कि? फेरि पनि के खोजेको हो?
प्रधानमन्त्री ज्यू, विभिन्न अभ्यासहरु गर्नु भयो। तपाईंका कार्बन कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमा तपाईंले गरेको अपराधको प्रतिरक्षा गर्न फरक मत राख्नेका लागि अरिङ्गाल बन्दैछन्। तपाईं गलत गर्दै जानुहुन्छ, तपाईंका कार्बनकपिहरु तपाईंको प्रतिरक्षा स्वरुप सडकमा नारा लगाउदै हिन्छन्।
संविधानको 'कू' गर्नु भो तर, तपाईंका भजन गायकहरु चोकचोकमा दिपावली मनाएर हिडेको देख्दा मलाई पनि ताजुव लाग्दैछ। जे गर्नुभो, त्यो नेपाली जनताको आँखामा अपराधतुल्य छ। नेपाली जनताको गुञ्जयमान गर्ने थलो भत्काइदिनु भयो। अब योभन्दा ठूलो अपमान र अपराध के होला र?
हामीले राजा निर्मम भए भनेर राजा फाल्यौं। तर, त्योभन्दा निर्मम श्री ६ ज्यूलाई बनाउन प्रेरित गर्नु भयो। तपाईंको यो सर्वसत्तावादी चरित्र र महत्वकांक्षाको नाटक मन्चन हामी हेर्न सक्दैनौँ। अब एक, दुई, तीन तपाईं झुटा बोल्न बन्द गर्नुहोस्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २२, २०७७, ०४:१८:००